Nkà na ụzụ ọ na-akwado ma ọ bụ gbanyụọ ahịa gị? | Martech Zone
N'ịbụ ndị rụworo ọrụ na Software dị ka Ọrụ n'ime afọ iri gara aga, ọtụtụ ewu ewu ya sitere na ụlọ ọrụ anaghị arụ ọrụ site na ngalaba IT ya. “Ọ bụrụhaala na ị gaghị agwa ndị IT anyị okwu!", Bụ mantra m na-anụ mgbe mgbe,"Ha na-arụsi ọrụ ike!".
A na-arịọ arịrịọ ọ bụla site na nhazi usoro ma mechaa zute 482 ihe kpatara ya enweghị ike -eme. O doro anya na ndị a bụ otu ụmụ okorobịa na-enweta n'ezie iwe mgbe ị na-ele anya mpụga maka azịza ya!
Ọ na-ajụ ajụjụ a, ngalaba gị IT ọ na-enyere mbọ ahịa gị aka ka ọ na-egbochi ya? Y’oburu na ibu onye isi IT, you n’oru oru ubochi obula iji nyere ndi ahia gi aka ka obu naani i ju ha?
Ọ bụrụ na azịza nke abụọ bụ nke ikpeazụ, ọ bụ ọgba aghara na m kwenyere na-eto eto. Ọtụtụ ndị ahịa m maara bụ o JULA m na ngalaba IT ha. N'otu azụmahịa m na-arụ ọrụ (nke na-akwado ọtụtụ sava weebụ), anyị gara n'ezie wee zụta ngwugwu nnabata mpụga.
Oge erugo ịgbanwe! Ngalaba IT gị kwesịrị ịbụ ọrụ na ị nwee teknụzụ dị mkpa iji rụọ ọrụ gị.
Nke a bụ nnukwu post si Hugh MacLeod na isiokwu:
Nov 10, 2008 na 9:40 PM
Enwere m obi ụtọ na-agba ọsọ na teknụzụ na arụmọrụ maka ọtụtụ mmalite. Nnukwu ngwa ngwa na-eto eto na mkpa ahịa dị ukwuu. Ọ bụrụ na ọbụghị maka ịrụkọ ọrụ ọnụ n’etiti otu ndị na - eji teknụzụ, ekwenti, ịre ahịa, na ọfụma ọ nweghị ihe ga - eme.
Mmekọrịta kwesịrị ime yana achọrọ ka ekerịta akụ. Ihe kpatara ọtụtụ n'ime IT ga-enye gị ọtụtụ ihe ndị na-adịghị mma bụ ndị a (opekata mpe na ahụmịhe m):
1. Ọtụtụ teknụzụ na-emefu ego na-esi ike. Enweghị ụlọ ọ bụla iku ume. Na-eweta ihe ọzọ ga-efu ego, mana ị KWES toR to iweta ihe ọ bụla na tebụl ma arịrịọ, ị naghị emekọ ihe dịka otu anyaukwu gị na-emerụ ụlọ ọrụ ahụ. Somethingchọrọ ihe - kwụọ ụgwọ maka ya. Ihe omuma teknụzụ anaghị akwụ ụgwọ.
2. Ndị IT abụghị ndị nzuzu. Ọ bụrụ na i mesoo ha otu a, ha ga-akwụghachi gị. Nke ahụ bụ ndụ. Ọ bụ uru kachasị mma nke ụlọ ọrụ ahụ na ị na-etinye oge iji jide n'aka na ndị IT nwere nghọta zuru oke banyere mmetụta ọrụ gị nwere. Ntinye ntinye ma ị ga-enweta mmekorita.
Teknụzụ azụmahịa bụ isi nke nrụpụta ọrụ na ịdị irè nke ndị ọrụ. Imeso ya ihe na-erughị nke ahụ bụ ezi mkpebi.
N’ikpeazụ, ọrụ teknụzụ nke dị ka ihe dị mfe maka ndị na-abụghị teknụzụ na-esikarị ike ịrụzu. Ọrụ siri ike nwere ike ịnwe ngwọta dị mfe. Soro ndị otu gị rụkọọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị họrọ ike silos, karịa ị kwesịrị ịtụ anya na ndị ogbenye na ya pụta.
E kwesiri inwe otu onye site na IT gi na nzuko ahia obula. Nke ahụ bụ ihe m na-akwado.
Naanị cents 2 m.
Nov 11, 2008 na 12:37 PM
Apollo, ebe m kwenyere n'ihe niile ikwuru, echeghị m na ntụgharị uche a bụ ihe ziri ezi maka nsogbu IT. Ogologo ya na nkenke ya na-agbadata ebumnuche azụmahịa. Okwesịrị ịhakọ na ebumnuche azụmaahịa kachasị na ọ bụghị maka IT ọ bụ maka azụmaahịa.
Banyere ndị IT abụghị ndị nzuzu na ekwesighi ka emeso ha otu a, ekwenyere m. Ma ọzọ, ọ bụ ọrụ dịịrị ndị ndu IT ịgbanwe ọdịdị nke ngalaba ya ma hụ na ndị ya anaghị emeghachi omume adịghị mma.
Ọ na-ewe ezi ndu na IT iji mee ezigbo ngalaba IT. Onye ndu ga-apụ n'ọrụ "A bụ m onye ọrụ ntanetị" wee tinye "Kedu ka IT ga-esi nyere gị aka taa?" okpu. Naanị n'ihi na IT kwesịrị itinye aka na nzukọ apụtaghị na ị ga-abụ belụsọ ma ị kwadoro uru nke IT ma gbanwee echiche nke IT.
Ọ dị n’aka onye ndu IT ịme ka ngalaba IT nwee ike na nke ahụ pụtara ịgbanwe ụzọ IT si eme ya na ihe IT gbasara. Ọ bụghị maka teknụzụ ọ bụ maka azụmaahịa na ịme azụmahịa.
Nov 10, 2008 na 11:09 PM
Na ahụmahụ m, Ngalaba IT na-egbochi ọtụtụ usoro ahịa.
I kwuru eziokwu… Oge eruola maka mgbanwe!
Nov 11, 2008 na 12:24 PM
Ebe m bụ CIO maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ijeri dollar ụlọ ọrụ na ọ dị m ahụmahụ na ọtụtụ IT ngalaba ga-nanị igba ala ihe n'ihi na ha achọghị obibi ya. Ruo ọtụtụ afọ, agwara m ndị ọrụ m, ndị ọgbọ na ndị isi m na ọ bụrụ na ha chọrọ ihe ọhụụ, ọ ga-abụrịrị onye na-enyere aka ọ bụghị onye nwere ike iwepu ya!
Nye ndị ọrụ m ọ pụtara ịge ntị na arịrịọ ahụ, ọ bụrụ na njikwa kpebiri na ọ bụ ọrụ dị mkpa ka eme ya. Dị mfe dị ka nke ahụ. Ọ bụrụ na ha nwere ike imeziwanye usoro na-eme ka ọ dịkwuo mfe, ngwa ngwa, ma dịkwa ọnụ ala na-egosi ya! Chọọ ohere ndị ahụ.
Nye ndị ọgbọ m ọ pụtara na ha ga-emeghe nke echiche sitere n'èzí na mpaghara ha ma bụrụkwa ndị dị njikere ịkọwa nsogbu ha n'usoro nke teknụzụ nwere ike ịghọta ma nyere aka.
Nye ndị isi m ọ pụtara ịnakwere mgbanwe, na-enye ikike ma na-enye ike IT ebe ọ dị mkpa yana nke kachasị mkpa iji kwado ebumnuche IT na ebumnuche azụmaahịa dịka mmesi obi ike, nrụpụta ọrụ na ịghọta na ọ bụ ezie na IT abụghị onye na-eweta ego na-akpata ego ọ nwere ike ịchekwa ụlọ ọrụ ahụ ego kwa afọ. karịa ka ọ nọrọ. Ọ B haveGH to ịbụ naanị ọnụ ahịa ya.
Naanị n'ihi na ọ “bụ na mmefu ego” abụghị ezigbo ihe ngọpụ ghara mejuputa a na-eri na-azọpụta, arụmọrụ mmezi mmemme. Ọ pụtara na anyị kwesịrị re-prioritize anyị oru ngo na inupụ somethings azụ.
Nov 12, 2008 na 11:25 AM
Ọ bụghị naanị ndị IT-ụmụ okorobịa nwere ike ịkwụsị mgbalị ịre ahịa site na teknụzụ ọhụụ. Mgbe ụfọdụ ị na-abanye ndị na-ere ahịa nwere ike ịjụ teknụzụ ọhụụ, n'ihi na ha nwere ike ịhụ ya dị ka ihe iyi egwu na ọrụ ha.
Ekwenyere m na onye ọ bụla tinyere aka na ịzụ ahịa kwesịrị ịgbanwe onwe ya na teknụzụ ọhụụ ọhụụ na ọnụ ahịa. Ndị na-adịghị eme ihe na-eche ihu oge siri ike karịa ndị na-eche ya ihu.
Nov 12, 2008 na 6:56 PM
Ekwenyere m na Peter Drucker nwere ọnụego otu oge kwuru, sị, “Gịnị mere 'M' na IT?” Ihe IT gbadoro anya ma dịrị na teknụzụ. Ọ naghị adịkarị ndị ọrụ ozi ma ọ bụ ndị nkwukọrịta, ma ọ bụ ndị mmadụ iji kwado mmemme ọhụụ nke IT. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọtụtụ ngalaba IT kwesịrị ịkpọ aha "HelpDesk" ma ọ bụ "Ngalaba Email".
Nov 12, 2008 na 11:07 PM
Na "Nkwado ekwentị", kwa!
Mee 29, 2013 na 9: 12 AM
Peter Drucker dere ezigbo edemede 10 ma ọ bụ afọ ole na ole gara aga. O kwuru na e mere ndị na-ebi akwụkwọ ndị nwe na ndị Baron n'oge mgbanwe mgbanwe ozi gara aga n'ihi na e nyere ha otuto na-ezighi ezi maka ozi emere. Ka oge na-aga, ha ghọrọ olu akwa na-acha anụnụ anụnụ, nke a hụrụ dị ka ndị ọkachamara karịa ndị okike n'ezie.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-elekọta ndị ọrụ IT ha n'amaghị ama na-ekpebi ihe a ga-eme na mbụ.
Na-ezukọ otu ugboro n'ọnwa, ma ọ bụ kwa izu abụọ, ndị na-elekọta ụlọ ọrụ kwesịrị ịhazi ihe ndị dị mkpa. Gwazie onye ọ bụla, tinyere IT, ihe ha bụ. Gbaa mbọ hụ na ihe dị mkpa na-eme, yana, dịkwa oke mkpa, ihe agaghị eme n’ọnwa a.
Ọ bụrụ n ’ị na-ekwe ka IT bute ụzọ n’usoro, ị na-eme ha Ọga na Ọkwa. Ekwesịrị iji ha kpọrọ ihe maka ịkwado na ịkwado ọhụụ nke ụlọ ọrụ gị, mana ịhapụ ibute ụzọ maka ha, na ịghara ịgwa ndị ọrụ ihe agaghị eme, anaghị eduga ụlọ ọrụ gị.
Mee 29, 2013 na 10: 33 AM
Kpamkpam kwenyere, @ facebook-1229758293: disqus!